साप्ताहिक संवाददाता , श्रावण २९, २०७४
एमटिभीको लोकप्रिय कार्यक्रम स्प्लिट भिल्लाको सिजन १० मा एउटी नेपाली मोडल पनि प्रतिस्पर्धी छिन् । मोडलका रूपमा स्थापित हुने क्रममा रहेकी भैंसेपाटी, ललितपुरकी इशा खड्का चौधरीले प्रेमी खोज्ने अवधारणामा आधारित उक्त रियालिटी शोमा प्रतिस्पर्धा गर्ने मौका पाएकी हुन् । पुरा पढ्नुहोस्
राधिका अधिकारी, श्रावण २९, २०७४
जीवनमा सफलताको शिखर चढ्ने र आफ्नो अस्तित्व कायम गर्ने हर मानिसको चाहना हुन्छ । तर, जीवन आफूले सोचेजस्तो ठिक्क ठिक्कसाग एउटै लयमा बग्दैन । नचाहेरै पनि अनेकौँ बाधा, व्यवधान, झन्झट, झमेलाहरुमा रुमलिन बाध्य मान्छे र परिवेश कथा टपक्क पात्रमा उनेर आख्यानमा प्रस्तुत गर्न पटक्कै सजिलो भएन कवि हेम प्रभावसलाई । पुरा पढ्नुहोस्
अभिनेत्री अश्लेषा ठकुरी चलचित्र प्रेमगीत–२ को उत्साहजनक व्यवसायबाट उत्साहित छिन् । चलचित्र प्रदर्शन हुनुअघि सार्वजनिक भएका ट्ेरलर तथा गीतहरू हेरेपछि दर्शकले अश्लेषालाई नराम्री भनेर टिप्पणी गरेका थिए । अश्लेषाले पनि सामाजिक सञ्जालका ती प्रतिक्रिया पढेकी रै’छिन् । पुरा पढ्नुहोस्
छालाको वासनामा यौन उत्तेजना महसुस हुन्छ
करुणा कुँवर, मनोविदश्रावण २९, २०७४
म ३६ वर्षीय विवाहित पुरुष हुँ । मसँग भएको एउटा छालाको बेल्टसँगको सम्पर्क र वासनाले यौन उत्तेजना भएको महसुस हुन्छ ।पहिले–पहिले मलाई यो समस्या हो भन्ने लाग्दैनथ्यो, बरु रोमान्टिक विचारजस्तो लाग्थ्यो तर हिजोआज समस्या नै हो कि जस्तो लाग्न थालेको छ । यो कस्तो समस्या हो ? पुरा पढ्नुहोस्
कुनै पनि खेलको प्रतिस्पर्धाका क्रममा कहिलेकाहीँ निकै रोचक क्षणहरू देखा पर्छन् भने कतिपय अवस्थामा खेलाडीहरू आ–आफैं रमाइलो पनि गरिरहेका हुन्छन् । अन्तर्राष्ट्रिय खेल प्रतिस्पर्धाका बेला खेलाडीहरूले अनुहार बिगारेको वा आफैं उनीहरूको अनुहार बिग्रिएको क्षणलाई फोटोग्राफरहरूले आफ्नो क्यामेरामा कैद गर्दै आएका छन् । पुरा पढ्नुहोस्
पछिल्लो समय नेपाली सिनेममा बिकेको एउटा संगीतकारको नाम हो– संगीतकार अर्जुन पोखरेल । उनले संगीत गरेका अधिकांश चलचित्र संगीत चर्चामा छन् । उनै अर्जुनको शब्द/संगीत रहेको अर्को गीत ‘तिमि रोएको पल’ लाई पनि उनका दर्शकले मन पराएका छन् । चलचित्र ‘ऐश्वर्य’ मा समावेश उक्त गीतमा सुगम पोखरेल र अन्जु पन्तको स्वर रहेको छ । पुरा पढ्नुहोस्
सबै नेपाली गीत एउटै एप्समा
मोबाइलमा गीत सुन्न अब एसडी कार्ड वा अन्य कुनै प्रकारको मेमोरी कार्ड राख्नुपर्ने छैन । नेपालका लोकप्रिय गीतका साथै आफूलाई मन पर्ने सबै गीत एउटै एप्सको सहयोगले सुन्न सकिने भएको छ । यसका लागि नेपाल टेलिकम र म्युजिक नेपालले सहकार्य गरेका छन् । पुरा पढ्नुहोस्
शुक्रबार रातीदेखि निरन्तर रुपमा परेको भिषण बर्षाका कारण देशको पूर्वी तथा पश्चिम नेपालको जनजीवन कष्टकर बनेको छ । देशभर ३५ भन्दा बढीको निधन भैसकेको छ । घर–घरमा पानी पसेपछि खाना र बस्नका लागि समेत समस्या देखिएको छ । पुरा पढ्नुहोस्
अहिलेका केटाकेटीको लभ कुखुराका भाले–पोथीको जस्तो
सबै स्थानमा आफ्नो योग्यता देखाउनु पनि उचित हुँदैन । परिस्थितिअनुसार मौन रहनु पनि फाइदाजनक हुन्छ । त्यही नि:शब्दताले नै सबै समस्या हल गरिदिन्छ । देश विकासका लागि केही गर्न सक्ने सक्षम, जुझारु एवं कर्मठ युवाहरू चिया पसलमा गफ गरेर घण्टौं समय खेर फाल्छन् अनि कसरी बन्छ त देश ? पुरा पढ्नुहोस्
एजेन्सी, श्रावण २९, २०७४
कट्रिनाले आफ्नो शरीरलाई मेन्टेन गर्न नृत्यको साहारा लिएको उनको भनाइ छ । गौहर आफूलाई फिट राख्न नृत्य एवं व्यायामका साथमा खानपिनमा ध्यान दिने बताउँछिन् । सही खाना सही मात्रामा खायो भने सुन्दर काया प्राप्त हुने गौहरको भनाइ छ । पुरा पढ्नुहोस्